Laydhka muuqaalka muuqaalka | Nadiifinta gidaarka LED | Nalalka barkadda LED-ka | xLedLight.com
Ku saabsan LongNor
LongNor Optoelectronics Co., Ltd. ayaa hogaamineysa Laydh Muuqaal, LED Wareer Dhuxul, Soo saaraha Isbeddelka Led Linear & alaab-qeybiyaha waxaa la aasaasay 2008 iyada oo in ka badan 200 oo shaqaale ah oo ku yaal Shenzhen China. Alaabtayada ayaa badanaa loo isticmaalaa nalalka kaniisadda, iftiinka casriga, iftiiminta qurxinta hudheelka, nalalka guryaha, nalalka ganacsiga iyo nalalka warshadaha. Shirkaddayadu waxay billowday soo saaridda LED neon flex, Nalalka LED-ka, Laydhadh toosan oo dabacsan oo LED ah horumarkii hore intii lagu jiray 2008-2011. Adeegyada OEM & ODM ayaa la bixiyay. oo leh koox R & D oo xoog leh oo xirfad leh sannado badan oo khibrad ah oo ku saabsan tiknoolajiyada nalalka LED-ka & alaabooyinka, kuwaas oo damaanad qaadi kara tayada ugu fiican iyo cimrigooda dheer. Waxaan sidoo kale bixinnaa naqshadeynta nalka iftiinka. Kuweena Nalalka Iftiinka Isha, Nalalka Laydhka Gudaha, Nalalka Pool LED, Kor u qaadista Geedka Palm, Strip debecsan LED, Nalalka Mashiinka CNC oo leh CE, RoHS, FCC, TUV, SAA, ISO9001 shahaadada.
Nalalka Geedaha Palm
48W Palm Tree Up Lights waxay ku habboon yihiin guryaha, hudheelada, naadiyadaha waddanka, dhismooyinka ganacsiga, jardiinooyinka iyo ku dhowaad dhammaan codsiyada iftiinka geedka timirta. Waxaa loo isticmaali karaa sida geedka timirta ee kor u kaca, iftiinka hoose ama labadaba isla waqti isku mid ah. Nalal u eg giraan si aad u iftiimiso geedaha timirta ah habeenkii, Iftiim aduunkaaga! Iyada oo cabirkeedu yahay dhexroor iyo watts kala duwan 12W-72W Palm Tree Up Lights Dhammaan qaybaha waa aluminium mana daxalaysan doono iyadoo laga tegayo geedka aan waxyeello u gaarin IP65 oo aan biyuhu la socon, muraayadda qabow ee AC100-250V ama AC / DC 24V CREE 3030 LED Gudaha Kuleylka Diiran, Dabeecadda cad, Qabow Caddaan, Casaan, Cagaar, Buluug, Jaale, Dahab, RGB Beddel, DMX512 8, 15, 30,60 xagal qafiif ah oo la heli karo
Nalalka Giraanta Palm Tree
Nalalka u eg giraanta si ay u iftiimiyaan geedaha timirta ah habeenkii, Palm Tree Ring Lights ayaa ku habboon guryaha, hudheelada, naadiyada dalka, dhismooyinka ganacsiga, jardiinooyinka iyo ku dhowaad dhammaan codsiyada iftiinka geedka timirta. Waxaa loo isticmaali karaa sida geedka timirta ee kor u kaca, iftiinka hoose ama labadaba isla waqtigaas Cabirka dhexroor kaladuwan iyo watts laga bilaabo 12W-72W Dhammaan qeybaha waa aluminium mana daxalaysan doono in geedku ka tago IPhone aan waxyeello lahayn IP65 biyo, muraayad qaboojiye AC100-250V ama AC / DC 24V CREE 3030 LED Gudaha Kuleylka Cad, Dabeecadda dabiiciga ah, Cool Cool, Casaan, Cagaar, Buluug, Jaale, Dahab, RGB Beddel, DMX512 8, 15, 30,60 xagal qafiif ah oo la heli karo
Giraanta Laydhka Palm Tree
Nalalka u eg giraanta si ay u iftiimiyaan geedaha timirta ah habeenkii, Wareegyada nalka loo yaqaan 'Palm geed' ayaa ku habboon guryaha, hudheelada, naadiyada dalka, dhismooyinka ganacsiga, jardiinooyinka iyo ku dhowaad dhammaan dalabyada iftiinka geedka timirta. Waxaa loo isticmaali karaa sida geedka timirta ee kor u kaca, iftiinka hoose ama labadaba isla waqtigaas Cabirka dhexroor kaladuwan iyo watts laga bilaabo 12W-72W Giraanta nalka geedka timirta Dhammaan qeybaha waa aluminium mana daxalaysan doonaan in geedku ka tago IP65 aan waxyeello gaadhin, muraayad qabow AC100- 250V ama AC / DC 24V CREE 3030 LED Gudaha Kuleylka Cad, Dabeecadda dabiiciga, Cool Cool, Casaan, Cagaar, Buluug, Jaale, Dahab, RGB Isbeddel, DMX512 8, 15, 30,60 xagal iftiin iftiin leh
Iftiinka Beerta Joogta, Haddii iftiinka muuqaalka uu ku sawirayo iftiin, ka dib kororka beerta Nalalka waa burush. Nalalka Spike ayaa loo adeegsadaa xoojinta nalalka banaanka - si loogu waco qaab-dhismeedka gaarka ah ama qaababka muuqaalka. Si ka duwan nalalka daadadka ee iftiimiya aag ballaaran, nalalka iftiinka leh waxay leeyihiin shumacyo cidhiidhi ah sidaa darteed waxay diiradda saari karaan hal shay markiiba.
Inground Uplight AS Taxanaha
Gudaha Gudaha, Iftiiminta Laydhka Gudaha & Wershaddii Iftiiminta LED-ka ee Shiinaha, soo saarista Tooska ah Iftiiminta Banaanka, Wareegga gidaarka LED, Isha Nalalka Nalalka
Nalalka Gudaha Lights AR
Taxanaha Laydhka 'Inground Lights AR Series' iyo 'AR COB Series', AR waxaa laga dooran karaa 8 Darajo illaa 120 darajo xagal darajo. Laakiin AR COB ee 120 darajo go'an oo ballaadhan xagal. Waxay u isticmaashaa goob muuqaal oo kala duwan.
LED Taxanaha Nalalka AE
Iftiiminta Gudaha Gudaha & Warshad Iftiiminta LED-ka ee Shiinaha, soo saarista Iftiiminta Dibadda ee Dibadda, Nadiifinta gidaarka LED, Nalalka Iftiinka LED
Taxanaha Laydhka Gudaha ee AD
Nalalka Laydhka Gudaha & Wershaddii Iftiiminta LED-ka ee Shiinaha, soo saarista Iftiiminta Dibadda ee Dibadda, Wareegga gidaarka LED, Nalalka Iftiinka LED
Nadiifiyaha Darbiga LED WW15 Taxanaha
Taxaneyaasha Darbiga LED WW15 Taxanaha waa jiilka xiga ee taxane dhaqa derbiga oo lagu farsameeyay waxqabad kordhay, wax -ku -oolnimo, wax -soo -saar iftiin, iyo xulashooyin badan oo xakameyn ah. Taxanaha WW15 wuxuu ku habboon yahay codsiyada dhaqidda derbiga dibedda waxaana loo maamuli karaa si madaxbannaan iyada oo aan lahayn kontoroole DMX ee midabada fudud iyo saamaynta midab-beddelka. Xakamaynta DMX waa ikhtiyaar u ah barnaamijyada iftiiminta horumarsan iyo midabyo gaar ah. Qalabku wuxuu ka shaqeeyaa DC24V, 120V ama 277V AC hardwire codsiyada.
Dhaqeeyaha Darbiga LED Taxanaha WW10
Daryeelka Darbiga LED Taxanaha WW10 waa jiilka xiga ee taxanaha dhaqe derbiga oo lagu farsameeyay waxqabad kordhay, wax -ku -oolnimo, wax -soo -saar iftiin, iyo xulashooyin badan oo xakameyn ah. Taxanaha WW10 wuxuu ku habboon yahay codsiyada dhaqidda derbiga dibedda waxaana loo maamuli karaa si madaxbannaan iyada oo aan lahayn kontoroole DMX ee midabada fudud iyo saameynta midab-beddelka. Xakamaynta DMX waa ikhtiyaar u ah barnaamijyada iftiiminta horumarsan iyo midabyo gaar ah. Qalabku wuxuu ka shaqeeyaa DC24V, 120V ama 277V AC hardwire codsiyada.
Laydhka dhaqe gidaarka WW8 Taxanaha
Taxanaha WW8 waa jiilka xiga ee taxanaha dhaqda derbiga oo lagu farsameeyay waxqabad kordhay, wax -ku -oolnimo, wax -soo -saar iftiin, iyo xulashooyin badan oo xakameyn ah. Taxanaha WW8 wuxuu ku habboon yahay codsiyada dhaqidda derbiga dibedda waxaana loo maamuli karaa si madaxbannaan iyada oo aan lahayn kontoroole DMX midabada fudud iyo saamaynta midab-beddelka. Xakamaynta DMX waa ikhtiyaar u ah barnaamijyada iftiiminta horumarsan iyo midabyo gaar ah. Qalabku wuxuu ka shaqeeyaa DC24V, 120V ama 277V AC hardwire codsiyada.
Nadiifiyaha Darbiga LED WW7 Taxanaha
WW7 waa jiilka xiga ee taxanaha dhaqda derbiga oo lagu farsameeyay waxqabad kordhay, wax -ku -oolnimo, wax -soo -saar iftiin, iyo ikhtiyaarro koontarool badan. Taxanaha WW7 wuxuu ku habboon yahay codsiyada dhaqidda derbiga dibedda waxaana loo maamuli karaa si madaxbannaan iyada oo aan lahayn kontoroole DMX ee midabada fudud iyo saamaynta midab-beddelka. Xakamaynta DMX waa ikhtiyaar u ah barnaamijyada iftiiminta horumarsan iyo midabyo gaar ah. Qalabku wuxuu ka shaqeeyaa DC24V, 120V ama 277V AC hardwire codsiyada.
Nalalka barkadda dabaasha
Nalalka barkadda dabaasha & wershad iftiiminta muuqaalka LED-ka ee Shiinaha, soo saarista Iftiiminta Dibadda ee Dibadda, Nadiifiyaha gidaarka ee LED-ka, Nalalka Iftiinka Iftiinka, Sheygan oo ah qiime aad u tartan badan leh 6W, 9W, 12W, 15W, 18W iyo 24W nalalka barkadda dabaasha.
Nalalka barkadda dhexdeeda
Nalalka barkadda dhexdeeda & warshad nalalka iftiinka muuqaalka ee Shiinaha, soo saaraha Iftiiminta Dibadda, Iftiinka Wall Wall, Nalalka barkadda dabaasha
Nalalka barkadda 'Par56 LED'
Waxaan haynaa 3 nooc oo Par56 LED nalalka barkada oo leh waxyaabo kala duwan. Waxay noqon kartaa kontoroolka fog ee riyada midabka RGB ama ha u bedesho midabka si otomaatig ah. Cimri aad u dheer oo leh dammaanad 3 sano ah
Nalalka Barkadda LED Taxanaha
Nalalka Barkadda LED-ka ayaa si fiican loogu yaqaanaa waxtarkooda, Midabyo kala duwan oo fara badan ayaa dib loo soo saari karaa iyada oo aan loo baahnayn in la isticmaalo shaandhooyin dheeri ah. Nalalka barkadda ee loo yaqaan 'LED Pool Lights' waa kuwo aad u adkeysi badan iyo tirada jeer ee la demiyo iyo marka la sii daayo, tallaabo aad u soo noqnoqota oo ku saabsan nalalka muuqaalka biyaha, ayaan wax saameyn ah ku yeelan noloshooda waxtarka leh. Waxaan ku guuleysan karnaa midab kasta adoo isticmaalaya isku-darka xakamaynta DMX512.
LED dabacsan DRL Light Bar
LED Debecsan DRL Bar Bar Patent shay. Waa qaab qaab maskaxeed oo dhuuban, Osram 5050 LED gudaha ah. waxay ku foorari kartaa waxaad rabto. Naqshadeynta muuqaalka gaarka ah, naqshadeynta waxaa dhiirrigeliyay “abeeso qani ah” Rakibaadda foosha xun, waxay korsataa ilayska korontada leh ee korontada leh ee la soo dhoofiyo, lampshade wuxuu qaataa muraayadaha kondenser-ka si uu u soo saaro iftiin xoog leh, naqshad gaar ah, waxaa loo laaban karaa 360 darajo si loogu rakibo jihooyin kala duwan; Baaxad ballaaran ayaa ku habboon booska rakibidda adag ee gaariga; dhabarku wuxuu ku qalabaysan yahay koolo laba dhinac leh oo aad u sarreeya waa la dhejin karaa, labada daraf ee jirka laambadana waxaa lagu qalabeeyaa daloolo fur si loo xiro boolal. Jidhka laambaddu waa shaabadaysan yahay oo biyuhu ma laha. Darajada biyuhu IP67
Bar iftiin COB LED
COB LED Light Bar, Chips on board aluminium, cimri aad u dheer iyo yareynta iftiinka hooseeya, Iftiimintu waa mid aad u lebisan, waxay ilaalisaa indhaha, oo ma dhalaasho
240V LED Neon Linear - Nalalka toosan ee jilicsan ee loo yaqaan 'LED light' oo loogu talagalay nalalka dhismaha ee banaanka oo leh dusha iftiinka si siman oo dhibic leh. Cusbooneysiinta ay keeneen xariiqyadan laydhadhka ah ee 2 cabbir ah ayaa albaabada u furay albaab cusub oo nalka naqshadeynta ah kuwaas oo aan la heli karin ilays kasta oo markaas jiray. Khadkeena tooska ah ee loo yaqaan 'LED neon linear' wuxuu si dhakhso leh ugu kasbanayaa aqoonsiga xirfadleyda nalka naqshadeynta iyo khubarada berrinka - badiyaa waa la guuriyaa, weligood isma barbar dhigno.
110V LED Neon Linear. Sanadihii la soo dhaafey, waxaan ka soo ururinay talo iyo figrado naqshadayaasha nalka, naqshadaha, injineerada. waxaan soo saarnay Midab run ah. Midabka runta ah waa nalka LED-ka iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyad cusub oo polyurethane encapsulation ah oo bixisa ilaalin IP67 ah oo soo gala oo ay weheliso bixinta ugu fiican ee muuqaalka LED-ka, iyadoo laga fogaanayo wax isbeddel ah oo CCT ah: Midab Run ah. Waxaa lagu heli karaa 2 nooc. Magaca ugu horreeya ee loo yaqaan 'Top View' wuxuu la wareegayaa codsiyada uu daboolay kii ka horreeyay ee 2D foorarka dhinaca midig u ifaya. Kala duwanaanta labaad waxay fidineysaa xuduudaha naqshadeynta nalalka iyadoo la siinayo khad toosan oo isleeg ah oo qalloocan ama qalloocsan kara 3 cabir (3D) si loo raaco wixii qallooca ah ee ku jira fikradaha qaab dhismeedka casriga ah. Labada Sare
Nalalka Shaqada Mashiinka CNC
Nalalka Shaqada ee Mashiinka CNC wuxuu hubiyaa sanado hawlgal ah iyada oo aan la dayactirin kharashyada la dhimay, aragtida la wanaajiyay ee kormeerka muuqaalka aadanaha, wuxuuna horseedaa tayada badeecada iyo wax soo saarka oo la hagaajiyay. Nalalka LED -ka ayaa si fudud u beddelaya fluorescents si loo hagaajiyo hawlgalka saldhigga shaqada iyo beddelka la dhimay, dayactirka iyo kharashyada tamarta guud. Nalalka Shaqada Mashiinka CNC, soosaarka nalalka warshadaha iyo codsiyada aaladda mashiinka. Waxaan kaydinnaa mashiinnada warshadaha nalalka shaqada nalalka LED ee ku habboon bay'ada dukaanka mashiinka adag. qaabka tuubada, Qaabka la galiyay waajibaadka culus ee nalalka LED -ku waa raagayaan waxayna ku habboon yihiin mashiinnada maydhashada - u adkaysta biyaha, saliidda, qaboojiyaha iyo kiimikooyinka kale. Qaansooyinka sibidhka ee dhaadheer ee caalamiga ah ayaa u oggolaanaya rakibidda iftiinka shaqada fudud ee saldhigyada shaqada mashiinka CNC. Haddii aadan arag CNC Work Work Light taas
Laydhka Mashiinka CNC ee laba gees leh
Laydhka Mashiinka CNC ee laba dhinac leh wuxuu hubiyaa sanado hawlgal ah iyada oo aan dayactir lagu samaynaynin kharashyada la dhimay, muuqaalka la hagaajiyay ee kormeerka muuqaalka aadanaha, wuxuuna horseedaa in la hagaajiyo tayada badeecada iyo wax soo saarka. Nalalka LED -ka ayaa si fudud u beddelaya fluorescents si loo hagaajiyo hawlgalka saldhigga shaqada iyo beddelka la dhimay, dayactirka iyo kharashyada tamarta guud. Laydhka Mashiinka CNC ee laba gees leh, soosaarka nalalka warshadaha iyo codsiyada aaladda mashiinka. Waxaan kaydinnaa mashiinnada warshadaha nalalka shaqada nalalka LED ee ku habboon bay'ada dukaanka mashiinka adag. qaabka tuubada, Qaabka la galiyay waajibaadka culus ee nalalka LED -ku waa raagayaan waxayna ku habboon yihiin mashiinnada maydhashada - u adkaysta biyaha, saliidda, qaboojiyaha iyo kiimikooyinka kale. Qaansooyinka sibidhka ee dhaadheer ee caalamiga ah ayaa u oggolaanaya rakibidda iftiinka shaqada fudud ee saldhigyada shaqada mashiinka CNC. Haddii aadan arkin Shaqada Mashiinka CNC
Tube LED CNC Mashiinnada Shaqada
Tube LED CNC Machine Light Lights Work wuxuu hubiyaa sanado badan oo hawlgal ah iyada oo aan la dayactirin kharashyada la dhimay, muuqaalka la hagaajiyay ee kormeerka muuqaalka aadanaha, wuxuuna horseedaa tayada badeecadda oo soo hagaagtay iyo wax soo saarkeeda. Nalalka LED -ka ayaa si fudud u beddelaya fluorescents si loo hagaajiyo hawlgalka saldhigga shaqada iyo beddelka la dhimay, dayactirka iyo kharashyada tamarta guud. Tube LED CNC Mashiinnada Shaqada, soosaarka nalalka warshadaha iyo codsiyada aaladda mashiinka. Waxaan kaydinnaa mashiinnada warshadaha nalalka shaqada nalalka LED ee ku habboon bay'ada dukaanka mashiinka adag. qaabka tuubada, Qaabka la galiyay waajibaadka culus ee nalalka LED -ku waa raagayaan waxayna ku habboon yihiin mashiinnada maydhashada - u adkaysta biyaha, saliidda, qaboojiyaha iyo kiimikooyinka kale. Qaansooyinka sibidhka ee dhaadheer ee caalamiga ah ayaa u oggolaanaya rakibidda iftiinka shaqada fudud ee saldhigyada shaqada mashiinka CNC. Haddii aadan arkin CNC
Laydhka Nalalka ee loogu talagalay Mashiinka CNC
Nalalka LED-ka ee loogu talagalay Mashiinka CNC, B0012-22WL44 oo wata shahaadada CE EMC. Xasilooni badan, iftiin la'aan mashiinka mashiinka CNC, Mashiinka CNC LED Lamp wuxuu hubiyaa sanado hawlgal la'aan dayactir kharashyada la dhimay, aragtida la wanaajiyay ee kormeerka muuqaalka aadanaha, wuxuuna horseedaa tayada badeecada iyo wax soo saarka oo la hagaajiyay. Nalalka LED -ka ayaa si fudud u beddelaya fluorescents si loo hagaajiyo hawlgalka saldhigga shaqada iyo beddelidda dhimista, dayactirka iyo kharashyada tamarta guud. Nalalka shaqada mashiinka LED ee mashiinnada CNC, soosaarka nalalka warshadaha iyo codsiyada aaladda mashiinka. Waxaan kaydinnaa mashiinnada warshadaha nalalka shaqada nalalka LED ee ku habboon bay'ada dukaanka mashiinka adag. qaabka tuubada, Qaabka la galiyay waajibaadka culus ee nalalka LED -ku waa raagayaan waxayna ku habboon yihiin mashiinnada maydhashada - u adkaysta biyaha, saliidda, qaboojiyaha iyo kiimikooyinka kale. Siraha kor u qaadista Universal
"Qabriga" ee laambadda aan tooska ahayn, waddada loo maro ilaha cusub ee nalalka LED -ka
Taariikhda: 09 / 10 / 2021
Ka dib markii Edison, oo keli-talis ku ahaa suuqa caasimadda, nalalka soo-saarka badan, codsiga nalalka wuxuu galay xilli horumar degdeg ah. Marka loo eego xogta cilmi -baarista ee ay daabaceen Fouquet iyo Pearson, sida aan u ...
Iftiinka mustaqbalka waa laydhka laydhka ama laydhka OLED?
Taariikhda: 24 / 08 / 2018
Hadda waxa jira laba nooc oo asaas ah oo ah qalabyada nalalka adag-gobolka: LED, OLED. Halbeegyada hadda jira aad ayay u yar yihiin (qiyaastii hal milimitir laba jibbaaran) waxayna aad u iftiimayaan. Ka dib markii la sameeyay ...
Ogeysiiska Magaca Shirkadda Isbedelka
Taariikhda: 04 / 06 / 2018
Macaamiisha Qaaliga ah ee Qiimaha Leh, Alaab-qeybiyeyaasha, iyo Wada-hawlgalayaasha Ganacsi; Laga bilaabo Juun 2th 2018, waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno inaan u beddeleyno magaca shirkadeena: LongNor Optoelectronics Co., Limited Our ...
Waddada mustaqbaleedka cusub-Tuba light light
Inkastoo cuntadeenu rabto in korantada korontada ay sii korodho, haddana wacyi-gelinta aannu u baahannahay si aan u kordhino waxtarka. Meelo ka mid ah ganacsiga ganacsiga oo aan kari karno oo keliya ...
Nalalka Calaamadda iftiinka (LED) waa qalab yar oo qalabka korontada ku shaqeeya oo kor u qaadaya koronto. Nalalka LED-ga ayaa ku dhowaad illaa 1960s, laakiin hadda waxay bilaabaneysaa in ay ka muuqato astaanta degaanka.
Hot Spring Club Hotel Naqshadeynta Naqshadeeynta Engineering
LED Neon Flex For Five Stars Hotel Quruxsan
Nalalka Qurxinta Dhismaha Dukaanka
LED Neon Flex for Casino Casino
Nalalka Neon Flex ee loogu talagalay Bingo Casino ...